Parnassus: Sanduuqa Sinnaanta Muhiimka ah
Mawduuca: Beeraha, Waxtarka Tamarta
Parnassus, maamulaha sinnaanta dadweynaha, wuxuu aaminsan yahay in shirkaduhu ay kordhin karaan faa'iidada-iyo hantida maalgashadayaasha mustaqbalka fog-marka ay ku hawlan yihiin dhaqamada deegaanka, bulshada, iyo maamulka (ESG). Kooxda Parnassus waxay sameeyaan falanqayn dhamaystiran oo ku saabsan haynta kasta oo suurtagal ah si loo hubiyo saamaynta bulsheed ee sare iyo heerarka soo celinta maaliyadeed.
$90 milyan; asalkiisu yahay 2020
Parnassus waxay nadiifisay ESG isku dhafan iyo qaabka falanqaynta maalgashiga muddo 30 sano ah. Maaddaama ay tahay sanduuqa wadaaga ee ESG ee ugu weyn Mareykanka, waxay saameyn ku yeelan kartaa shirkadaha ay leedahay ka-qeybgalka cilmi-baarista.
Tusaalaha wada hadalka saamaynta leh waxa uu la dhacay Mondelez, soo saaraha cuntooyinka fudud sida Oreo cookies iyo Ritz crackers. Parnassus wuxuu ku biiray maalgashadayaasha kale ee ku cadaadinaya Mondelez inay wax ka qabato rikoorkeeda liidata ee qashinka xirmada. Isagoo ka jawaabaya go'aannada saamilayda iyo baadhista xooggan ee warbaahinta, Mondelez waxay ballan-qaadday inay hubiso in baakadaha waraaqaha si joogto ah loo soo ururiyay oo dib loo warshadayn karo 2025.
Si joogta ah uga sarreeya bartilmaameedka tan iyo markii la aasaasay.
McKnight wuxuu doortay Parnassus ka dib markii uu qiimeeyay laba maareeye oo kale oo leh astaamo soo-celin khatar ah oo isku mid ah. Is dhexgalka qoto dheer ee Parnassus ee ESG iyo rikoorkeeda taageerada go'aamada saamilayda bulshada iyo deegaanka ayaa saadaaliyay miisaanka ay ku jirto.
Sawirka Sawirka: Dino Reichmuth on Unsplash.